बाबुबाजेले भन्दै आएका छन् किन गर्नु हुँदैन नातामा बिहे ?
वास्तवमा बर्षाै पहिलेदेखि हाम्रा बाबुबाजेले भन्दै आएका छन् नातामा बिहे गर्न मिल्दैन वा गर्नु हँदैन । हिजो आज हामी मध्ये धेरैलाई यो कुरा रुढिवादी कुरा जस्तो लाग्छ । हिजो आज नातामा बिहे गर्न नहुने कुरालाई बेवास्ता गर्दै नातामा बिबाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । दाजु बहिनि, दिदि भाई, जस्तो नजिकैको नातामा पनि बिबाह भएको हामीले सुन्दै, देख्दै आएका छौँ तर बर्षौ देखी नै हाडनाताको सम्बन्धमा हुने बिवाह र स्वास्थ्यको बारेमा बहस हुँदै आएको छ ।
नातामा बिबाह गरेर जन्मिएका करिब ११,३०० बच्चाहरुको स्वास्थ्य स्थिति विश्लेषण गर्दा करिब एक तिहाई बच्चा जन्मजात बिभिन्न रोगवाट पिडित भएका थिए । युनिभर्सिटी अफ लिड्सका डा. इमोनन शेरिडनका अनुसार नाता बाहिर बिवाह गरेर जन्मिएका बच्चाभन्दा नातामा बिबाह गरेर जन्मिएका बच्चाहरु जन्मजात रोगहरुबाट पिडित हुने ३ देखि ६ प्रतिशत बढि जोखिम हुन्छ ।
उनले यसो भनिरहँदा नेपालमै पनि केहि चिकित्सकहरुले नजिकको नाता (रगतको नाता) मा बिहे नगर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । उनीहरु अनुसार नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा बालबालिकामा देखा परेको डरलाग्दो रोग थालेसिमियाको एक कारण पनि रगतको नाता वा नजिकको नाता भित्र विहे गर्नु रहेको मान्दछन् । आफ्नै नजिकैको नाता भित्र बिबाह गरेर जन्मिएका बच्चाहरुमा यो रोग लाग्ने संभावना अधिक रहेको उनीहरु वताउँछन् । बच्चा जन्मिएको ४ देखि ६ महिनामा नै यो रोगका लक्षण देखा पर्न थाल्छन् । शिशु गर्भमा रहँदा फिटल हेमोग्लोविनले काम गरिरहेको हुन्छ ।
थालेसिमिया रोग लागेको शिशुको जन्मसँगै शरीरलाई आवश्यक पर्ने रगत उत्पादन हुन सक्दैन र बच्चा सेतो हुँदै जाने, सुस्त हुने, नरुने, खान मन नगर्ने, पेट फुल्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छ । शरीरले रगत उत्पादन नगर्ने भएका थालेसिमिया लागेका बालबालिकाको उमेरअनुसारको तौल नहुने, नबढ्ने र अनुहार चेप्टो हुने गर्छ । नजिकको नातामा विवाह नगर्न, विवाहपूर्व रगत परीक्षण गर्न, संवाहकहरु माझ विवाह नगर्न र यो रोगलाई गम्भीरताका साथ लिन चिकित्सकहरुले सुझाएका छन्।
त्यसो त हिन्दु धर्म शास्त्रका विभिन्न पुस्तकहरुमा पनि नजिकको नातामा बिबाह गरेर जन्मिएका धेरै जसो बच्चाहरुको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुने, बच्चाको शारिरिक तथा मानसिक बिकास राम्रो संग हुन नसक्ने हुन्छ भनिएको छ । ती पुस्तकहरुमा सगोत्र अर्थात आफ्नो गोत्रमा पनि बिबाह गर्न हुदैन भनिएको छ । त्यसैले हाम्रा पुर्बजहरुले बिहे गर्दा गोत्र, थर फरक हुनु पर्ने, र नातामा कति पुस्ता फरक हो भन्ने बारेमा बुझेर मात्र बिबाहको लागि कुरा गर्ने गर्दथे । आज सम्म पनि धेरै ठाउमा बिहे गर्दा नाता पर्ने नपर्ने, कति पुस्ता फरक हो भन्ने बुझेर मात्र बिहे गर्ने प्रचलन छ ।